Capitec App Apk Dhawunirodha Yemahara Ye Android [Yazvino 2022]
Dai 29, 2022 February 10, 2022 by Shweta Nzira
Iye zvino mabhanga ezuva ari kutanga maApps ayo ekupa akachengeteka uye ari nyore mabhengi masevhisi kune vatengi vawo. Nhasi, ndagovera iyo yakafanana application kune Android nharembozha inozivikanwa se "Capitec App Apk"??.
Ihurumende Banking Application yeBhanga rakagadziridzwa kubatsira vatengi varo kuburikidza nenharembozha. Inoonekwa seimwe yemabhanga makuru muSouth Africa iyo yakavambwa muna 2001. Saka, parizvino, ine mazana ezviuru zvevatengi vari kuwana masevhisi kubva kwairi.
Nezve Capitec App
Ichi Chishandiso chinokupa iwe nemukana wekuita irinyore hupenyu hwemari kuitira kuti ugare hupenyu hwerunyararo. Nekuti tese tinoziva kuti iyi ndiyo makumi maviri neimwest zana ramakore uko vanhu vese vakabatikana zvakanyanya uye vasingakwanise kubata nguva yekushanyira mabhangi.
Naizvozvo, iwe unogona nyore nyore kuita mari kutapurirana, tarisa yako account account, kuendesa mari uye zvimwe zviitiko kuburikidza neinternet kana Cellphone Banking.
zera 35 MB
Developer Capitec Mobile Banking
Package Zita capitecbank.remote.prd
Inodiwa Android 4.4 uye Up
chikamu Apps - mari
Capitec Internet Banking
Kana iwe uine maLaptops, maPC, nharembozha dzeApple uye internet kubatana saka nei munhu achifanira kushanyira bazi. Nekuti yaunza iro rose bazi kumikova yako yekumba kubva kwaunogona kuwana ese masevhisi.
Kunyangwe munyika yepanguva ino, mhando iyi yemabhengi inoonekwa senzira yakachengeteka yekuchengetedza uye kuendesa mari. Kana iwe zvakare uchida kuwana iwo masevhisi kuburikidza nharembozha kana Internet Banking wobva waita app uye woiisa pane ako mafoni.
Kuti umhanye Chikumbiro, uchafanirwa Vhura Capitec Akaunti. Naizvozvo, kana iwe usati uine account asi ndapa nzira yekugadzira account mundima iyi nematanho akapusa. Saka, tevera aya pazasi matanho.
Chekutanga pane zvese, iwe uchafanirwa kuvhura iyo webhu browser.
Wobva washanyira iyi URL ”˜https://capitec.erecruit.co/candidateapp/Register'.
Iye zvino iwe uchaona yakazara fomu kwaunofanirwa kuisa ese anodikanwa ruzivo.
Mushure mekuzadza fomu nemazvo tinya pane ”˜gadzira' sarudzo.
Capitec Kuchengetedza Akaunti
Ikoko iwe unogona kuve nemhando mbiri dzakasiyana dzeakaunzi dzaunogona kuvhura. Mundima iri pamusoro, ndakagovana maitiro ekuzvinyoresa kubhangi. Asi pano muchikamu chino, ini ndichakutungamira kuti ugadzire account yekuchengetedza. Unogona kuigadzira uchishandisa iyo App. tevera nhanho idzi dzakapihwa imwe neumwe.
Chekutanga cheKutora Capitec Apk kubva pawebhusaiti yedu.
Wobva waiisa pane ako maApple.
Vhura iyo App.
Dzvanya / tora pane Chengetedza sarudzo.
Zvino nyora yako Remote PIN.
Wobva wadzvanya pane sarudzo ye” ˜Wedzera Flexible Savings'.
Capitec Bhizinesi Akaundi
Iwe haufanire kuigadzira yega account yazvo. Nekuti iri rimwe basa rinoshamisa rinopihwa nebhangi kune vatengi vayo vanoda kusimudzira bhizinesi ravo.
Uyezve, zvinogona kukubatsira kutanga mabhizinesi matsva. Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona kushanyira iyo yepamutemo webhusaiti yeChikumbiro uko kwaunowana ruzivo rwese maererano nezve mubvunzo.
Capitec Bank Chirevo
Zvitatimendi zvinyorwa zvakadhindwa kana zvinyorwa zvemagetsi kubva kumabhangi zvinoratidza izvo zviyero, kutengeserana kwemari, kubvisa, uye zvimwe. Kusvika iwe urikushandisa zviri pamutemo kunyorera kwebhangi, saka, iwe unowana zvese zvirevo zvaro kuburikidza neemail ako.
Capitec Mari Yekutamisa
Iyi Apk inonyanya kuvhurwa kubatsira vatengi mukutamisa mari kuaccount yemumwe munhu. Uyezve, iwe unowana chirevo chekubudirira kuchinjisa uye ruzivo rwekuruboshwe chiyero muaccount yako.
Maitiro EkuDhawunirodha Capitec App Apk?
Pano ini ndichakuudza kuti maitiro aungaita kuti utore kurodha pasi kune yako Android Mobiles. Naizvozvo, ini ndinokurudzira vese vashandisi kuti vafadze kupa kuverenga kune nhanho dzandakagovana pazasi.
Dhinda pasi kusvika kumagumo eichi chinyorwa.
Ikoko unowana bhatani rine zita re ”˜DOWNLOAD APK'.
Zvino tinya pane iro bhatani.
Sarudza nzvimbo kwaunoda kusevha iyo App Apk.
Zvino tinya pane Download sarudzo kuti uenderere mberi.
Mirira kwemaminetsi mashoma kurega iyo App Apk kurodha pasi.
Maitiro ekuisa Capitec App Apk?
Kuti uise iko kunyorera, iwe unoteedzera nhanho nhanho maitiro andakupa iwe. Kana iwe ukasa tevera nhanho zvakanyatso saka iyo app haishande kana iwe haugone kumisikidza nayo zvinobudirira.
Nekudaro, pane zvinhu zvakasiyana siyana zvemhando dzakatarisana nevashandisi mukati meizvo zvavanofanira kubata paNharembozha yavo yekubhengi Nhamba + 27 21 941 1377 kana kufona * 120 * 3279 #. Ngatitevere dzakapihwa matanho ari pazasi.
Kutanga kwekuDhawunirodha yazvino vhezheni App Apk kubva pawebhusaiti yedu.
Wobva waenda kumasefa eApple yako.
Ipapo sarudzo yekuchengetedza.
Zvino gonesa izvo zvisingazivikanwe masosi ekumisikidza maApks kubva kune wechitatu mapato.
Iye zvino dzokera kune iyo skrini yekumba.
Vhura iyo File Explorer application kubva kufoni yako.
Wobva wawana iyo Apk faira yawakatora kubva kune yedu webhusaiti.
Dzvanya pane iyo faira.
Iwe uchaona iyo yekuisa sarudzo.
Zvino tapira gadza.
Wobva wamirira kwemashanu kusvika gumi.
Iwe unogona zvakare kuyedza anotevera maapps pane ako mafoni, ayo akafanana neiyi Capitec App Apk.
Ichi chishandiso chigadzirwa chepamutemo chebhangi icho chandakagovana newe muchinyorwa chino. Iko hakuna shanduko dzinounzwa kuKushandisa uye zvakachengeteka zvachose uye spyware yemahara.
Nekudaro, kana iwe uchifarira nhare kana internet kubhengi saka hapana mhinduro iri nani kunze kweCapitec App Apk Dhawunirodha yeApple.
Q 1. Maitiro EkuDhawunirodha Capitec App pane yangu Runhare?
Ans. Ini ndakuudza pakutanga mundima iri pamusoro kuti maitiro aungaite kurodha pasi chirongwa. asi zvakare iri nyore nzira yekutora iyo app sezvo ini ndakagovana yakananga kurodha link yeApp pamagumo epeji. Dzvanya pane iyo yekubatanidza link kana bhatani ndizvozvo.
Q 2. Ko Capitec App Apk yakachengeteka here?
Ans. Ehe, nekuti iko iko iko kushanda kwebhangi.
Direct Download Rodha
Categories mari, Apps Tags Capitec Apk, Capitec Apk Download, Capitec App Apk, Kubhengi kwepamhepo Post navigation
BanglarBhumi APK Dhawunirodha yeAndroid [Yazvino 2022]
Colors TV App Rising Star Apk Dhawunirodha 2022 ye Android
Leave a Comment kukanzura mhinduro